चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन फिर्ता लैजाऊ : प्रधानमन्त्री ओली | Ratopati
नेपालमाथि ओलीको कटाक्ष : किर्नाले भैसी खायो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–खनाल समूहलाई पार्टीमाथि धावा बोल्ने काम भए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार काठमाडाैंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्धका सबै विरोध र टिका टिप्पणीलाई सहँदै आएको तर पार्टीमाथि धावा बोल्ने काम भए कारवाही गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने, “प्यादाले मन्त्री खान्छ चेसमा । भुसुनाले लामखुट्टेले हात्ती खान्छ । उपियाँले मान्छे खान्छ । कति खान्छ ? तिनीहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो । उपियाँले मान्छे खाए जस्तो । किर्नाले भैसी खाँदैन । किर्नाले भैसी खान्छ नि । किर्नाले भैसी खाएको देख्नुभएको छ कि छैन । यिनीहरुले गरेको हामीलाई कारवाही त्यस्तै हो । किर्नाले भैसी खाए जस्तै । किर्नाले भैसी खाने ? मनको यिनको रहर हो । तर किर्ना किर्नाकै ठाउँमा हुन्छ । भैसी भैसीकै ठाउँमा हुन्छ । सन्तोष गर्न पाईन्छ किर्नाले भैसी खाएकै हो । भैसी खायो खायो खायो पुटुक्क भयो किर्नु फुत्रुक्क झ्रयो । मजाले भैसी खायो, पुटुक्क भयो , फुत्रुक्क झ्यो । कति रोएका ? '